Bit By Bit - Misa kubatsirana - Activities
[ , , ] Mumwe kunakidza kutaura kubva Benoit et al. (2015) pane boka-Coding enyika manifestos ndechokuti migumisiro reproducible. Merz, Regel, and Lewandowski (2016) rinopa kuwana Manifesto Corpus. Edza zvichiberekana Fig 2 kubva Benoit et al. (2015) vachishandisa vashandi kubva Amazon Mechanical Zimbabwe Turk. Sei zvakafanana vaiva migumisiro dzako?
[ ] Munyaya InfluenzaNet chirongwa rokuzvipira eDare vanhu vanotaura kuitika, kuwanda, uye utano kutsvaka maitiro chokuita yokuSpain-kufanana-chirwere (he) (Tilston et al. 2010; Noort et al. 2015) .
Enzanisa magadzirirwo, mari, uye zvichida kumbokanganisawo InfluenzaNet, Google flu Trends, uye zvetsika yokuSpain Tracking hurongwa.
Funga nguva kugadzikana, akadai penguruve furuwenza yatanga. Rondedzera zvinobvira zvakakanganiswa nerimwe hurongwa.
[ , , ] The Economist ndiyo magazini nhau pavhiki. Gadzira computation womunhu chirongwa kuona kana nhamba vakadzi kuvarume pabutiro kwakawedzera nokufamba kwenguva.
Magazini dzinogona cover yakasiyana siyana munzvimbo sere (Africa, Asia Pacific, Europe, European Union, Latin America, Middle East, North America, uye United Kingdom) uye vanogona zvose kutorwa kubva Website pamusoro The Economist . Nhonga mumwe munzvimbo idzi uye kuita ongororo. Iva nechokwadi kuti kutsanangura maitiro ako zvakakwana zvizere kuti vaigona replicated nomumwe munhu.
Mubvunzo uyu akafuridzirwa yakafanana chirongwa naJustin Tenuto, mumwe date musayendisiti panguva crowdsourcing kambani CrowdFlower , ona "Time Magazine Chaizvo Likes Dudes" .
[ , , ] Kuvakira pamusoro mubvunzo kumusoro, zvino pedzisai kuongorora zvose kumatunhu masere.
Rwakasiyana sei zvaunowana mhiri kumatunhu?
zvikuru imwe nguva uye mari sei kutora kuti kukwira-up ongororo yako vasere vose kumatunhu?
Fungidzira kuti Economist ane cover siyana 100 vhiki yoga yoga. Anofungidzira sei zvikuru imwe nguva uye mari zvingadai kutora kuti kukwira-up ongororo yako cover 100 pavhiki.
[ , ] [Kaggle] (https://www.kaggle.com/) ndiye Website kuti inoshanyirwa rakazaruka kudanwa zvirongwa. Itaiwo mumwe mabasa iwayo.
[ ] Tarisai achishandisa nyaya kuchangobva imwe magazini mumunda wako. Pane mapepa angadai reformulated sezvo akazaruka kudanwa zvirongwa? Sei uchidaro kana kusadoro?
[ ] Purdam (2014) akarondedzera vakagovera date muunganidzwa pamusoro achipemha muLondon. Muchidimbu, zvatisingagoni ichi tsvakurudzo magadzirirwo.
[ ] Redundancy unokosha nzira rokuongorora unhu vakaparadzira mashoko muunganidzwa. Windt and Humphreys (2016) kuumba uye edzai hurongwa kuunganidza mishumo kunetsana zviitiko kubva kuvanhu vari Eastern Congo. Verengai bepa.
Sei magadzirirwo kwavo nechokwadi redundancy?
Vanopa Nzira akawanda hunotsigira kuti mashoko yakaunganidzwa pabasa ravo. Pfupisa navo. Waiva zvikuru uchapupu kwamuri?
Zvamaronga nzira itsva kuti mashoko zvaigona yakasimbiswa. Zvikarakadzo vanofanira kuedza kuwedzera chivimbo kuti ugozova ari mashoko nenzira hazvikudyiri mari yakawanda uye zvetsika.
[ ] Karim Lakhani uye nevamwe (2013) akasika kudanwa yakazarukira nokudembera algorithms itsva kugadzirisa chinetso computational Biology. Vakagamuchira submissions anopfuura 600 tune 89 yokufungidzira computational mharidzo. Pakati submissions, vakagamuchira 30 kuti vakapfuura chokupika weU.S. National Institutes of Health kuti MegaBLAST, uye zvakanaka kuzviisa pasi kubudirira zvose zvakarurama mukuru uye nokukurumidza (1,000 nguva nokukurumidza).
Verenga mapepa avo, uye ipapo zvamaronga munzanga chinetso tsvakurudzo aigona kushandisa vakadarovo rakavhurika nemakwikwi. Kunyanya, pachena mumakwikwi mhando iyi dziri rikurumidze uye kuvandudza mabasa kumbova algorithm. Kana usingagoni kufunga dambudziko sezvizvi mumunda mako, edza kutsanangura nei kwete.
[ ] Vakawanda yevanhu computation zvirongwa vanovimba vechikamu kubva Amazon Mechanical Zimbabwe Turk. Sign-up kuva mushandi Amazon Mechanical Zimbabwe Turk. Pedzai awa rimwe kushanda ikoko. Sei zvingona ichi pfungwa dzenyu pamusoro magadzirirwo, unhu, uye tsika kwevanhu compuation muzvirongwa?